स्वास्थ्य/जिबनशैली::Nepal's News Portal
चितवन : प्रसूति सेवामा नेपालमा नै अग्रणी मानिएको भरतपुर अस्पतालमा बच्चा जन्माउने महिलाको सङ्ख्या बढ्दो छ । गत आर्थिक वर्षमा १३ हजार ५४५ महिलाले अस्पतालमा बच्चा जन्माएका हुन् । तीमध्ये १३ हजार ३२७ जीवित बच्चा...
अचेलको व्यस्त जीवनशैलीका कारण मानिसहरूले राम्ररी निद्रा पु–याउन पनि पाउँदैनन् । केही मानिस त साना झप्कीमै निद्रा पूरा गर्छन् । केही अन्य चाहिँ हप्तामा एक दिन छुट्टी हुँदा दिनभरि सुत्छन् । प्रत्येक व्यक्तिका लागि कम्तीमा...
ओखलढुङ्गा : ओखलढुङ्गाको सुनकोशी गाउँपालिकाले एकल महिलाको उपचार खर्च व्यहोर्ने भएको छ । सुनकोशी गाउँपालिकाको चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममा एकल महिलालाई उपचार खर्च दिने उल्लेख गरिएको छ । ५० वर्ष...
मानिसहरुले आफ्नो विशेष साथी खोजिरहेका हुन्छन् । त्यही क्रममा उनीहरु प्रेम सम्बन्धमा पर्ने गर्छन् । धेरैले त्यही सम्बन्धलाई जीवनको अभिन्न अंगको अवस्थामा बदल्ने गर्छन् । अर्थात् विवाह गरेर युगौँयुग सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने वाचामा...
जीवनमा सुख, शान्ति तथा सफलता प्राप्त गर्न चाहनु हुन्छ भने आचार्य चाणक्यको नीतिलाई आत्मसाथ गर्नुहोस् । आचार्य चाणक्यले आफ्नो नीतिको प्रभावको माध्यमबाट नै चन्द्रगुप्त जस्तो सामान्य बालकलाई अखण्ड भारतको सम्राट बनाएका थिए । आचार्य चाणक्यले...
बाँके : कर्णाली प्रदेशको दुर्गम डोल्पामा लैजाने लाखौँ मूल्यको औषधि करीब सातादेखि नेपालगञ्ज विमानस्थलमा थन्किएको छ । नेपालगञ्जबाट जुफालका लागि हवाई उडान अवरुद्ध भएका कारण उक्त औषधि नेपालगञ्जमै थन्किएको हो । औषधि यही थन्किएपछि अहिले...
जाजरकोट : दुर्गम बारेकोट गाउँपालिकामा पछिल्लो समय महिला स्वास्थ्य संस्थामा आएर सुरक्षित ढङ्गबाट सुत्केरी गराउनेक्रम बढ्न थालेको छ । स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउँदा अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था नरहने र केही आर्थिक सहयोग पनि प्राप्त...
बच्चालाई कुपोषण भयो? चिन्ता नलिनुस्
बागलुङ : ‘कुपोषण’ लाई विपन्न परिवारका बच्चामा देखिने स्वास्थ्य समस्याका रूपमा लिने गरिन्छ तर, यहाँ ‘खातापिता’ परिवारकै बालबालिकामा यो समस्या देखिएको छ । पोषणविद्का अनुसार सन्तुलन मिलाएर खानेकुरा खुवाउन नजान्दा बालबालिकामा कुपोषणले सताउँछ । जैमिनी...
तपाईलाई मानसिक तनाव छ ? यसरी व्यवस्थापन गर्नुहोस्
मानसिक तनावका थुप्रै कारणहरू छन्। हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो अवस्थालाई कसरी लिन्छौ। त्यो चिजसँग हाम्रो तनाव निर्धारित हुन्छ। कुनै व्यक्तिलाई एउटा घट्नाले तनाव दिन सक्छ भने अर्कोलाई नदिन सक्छ। जस्तै भूकम्पका कारण कति व्यक्तिलाई तनाव...
धेरैजसो युवालाई सुहागरातका बारेमा थाहा हुँदैन । सुहागरातमा केटा पक्षले गर्ने जबरजस्तीका कारण केटी पक्षले सधैँ आशंका र त्रसित हुनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यस्तै त्यस रोमान्टिक क्षणलाई सम्झनायोग्य बनाउन नसक्दा धेरैका लागि...